Qorshe bilaash ah Adobe XD si loo qorsheeyo barnaamijyada hadda la heli karo | Abuurista khadka tooska ah
Waxaa jira qalab waxaan lumineynaa qiime inaad awood u yeelato inaad kasbato astaamahaas xirfadeed ee awooda inay ka soocaan shaqadeena kuwa kale. Laakiin tani way is beddeleysaa si hadda Adobe u soo bandhigto qorshaheeda Adobe XD ee bilaashka ah, oo ah qalab loogu talagalay abuurista barnaamijyo si fiican u qeexaya xilligan xaadirka ah ee moobiilka iyo kuwa casriga ah ee ku sii jiray nolosheena weligood.
Maanta ayay ahayd markii Adobe uu taas ku dhawaaqay waxay siisaa dadka isticmaala nooc ka mid ah barnaamijkeeda Naqshadeynta isku-xirka bilaashka ah. Waa si sax ah qorshaha bilaashka ah ee Adobe XD. Waxaa loo heli karaa labada isticmaale ee Windows iyo Mac isla waqtigaas, Adobe ayaa ku dhawaaqday inay u fidinayso 10 milyan oo doolar nashqadeeyayaasha si ay uga caawiso inay u abuuraan waxyaabo loogu talagalay aaladda naqshadeynta.
Fikradduna waxay tahay isla maalintaas Adobe daabacday xitaa wararka qaar ee XD, oo ay ku jiraan isdhexgalka wanaagsan ee Sketch iyo Adobe Photoshop. Adobe XD wuxuu isu soo bandhigayaa inuu yahay tartanka Sketch laftiisa, taas oo umuuqata inay boos fiican kaga jirto suuqa.
Ku saabsan qorshaha Adobe XD Starter waxaad ka heli doontaa dhammaan qalabka tusaalooyinka kaas oo laga heli karo nooca buuxa. Waxa kaliya ayaa ah, isticmaalayaashu waxay kaliya yeelan doonaan awood ay ku wadaagaan hal nooc oo ah qaabeynta naqshadeynta.
Marka waxay noqon kartaa naafonimo markaan raadineyno Adobe XD urur ama koox. Sikastaba xaalku ha ahaadee, bilaabida Adobe XD ayaa ah sida ugu wanaagsan ee sidaa loo sameeyo waana taas sababta ay shirkadu u siineyso casharro, talooyin iyo aalado ay ku bilaabaan mid ka mid ah qaybaha naqshadeynta ee sida weyn u sii fidaya.
Halkan waxaad leedahay isku xidhka si aad ipso facto ugu tagto Qorshaha Bilowga Adobe XD oo markaa bilaabaan inay ku shaqeeyaan qalabkan; ha moogaan taxanaha kheyraadka ee Adobe laftiisa lacag la'aan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Adobe wuxuu bilaabayaa qorshaha Adobe XD ee bilaashka ah sidaa darteed waxaad haysataa aaladaha naqshadeynta ugu fiican